Diyaaradihii jaadka Keeni jirey Muqdisho oo Jawhar Ka degay Iyo Sababta Keentay
(Hadhwanaagnews) Friday, April 21, 2017 00:28:45
Diyaaradihii Jaadka Keeni Jiray Muqdisho Oo Jawhar Ka Dagay Iyo Ganacsatada Oo Sababaynaya Go,aankooda
Jawhar(HWN):-Diyaaradihii qaadka keeni jiray magaalada Muqdisho ayaa maanta ka dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada jawhar.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada Jawhar ee xarunta gobolka shabeelada dhexe, ganacsatada iska lahayd qaadka diyaaradaha lagu keeno ee magaalada Muqdisho ayaa go,aan ku gaadhay inay qaadkooda ka dajiyaan magaalada Jawhar.
Ganacsatada jaadka ayaa la sheegay inay gadood weyn ka muujiyeen cashuuro dheeraad ah oo lagu soo rogay jaadka ka daga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, iyaga oo ganacsataduna muujinaya sida ay uga soo horjeedaan cashuurta lagu soo rogay jaadka gaadhaya magaalada Muqdisho.
Sida ay wararku sheegayaan marduufka jaadka ah ee ka
daga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa lagu cashuuri jiray lacag dhan 43,000(sadexyo afartan kun oo shilin Somali ah), iyaga oo ganacsataduna sheegay in hada lagu kordhiyey isla markaana laga dhigay 53,000(sadexyo konton kun oo shilin Somali ah), taas oo ka dhigan in cashuurta jaadka la kordhiyey lacag dhan 10,000(toban kun oo shilin Somali ah).
Dhinaca kale maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku soo dhaweeyey go,aanka ay qaateen ganacsatada jaadkooda ka soo dajiyey xarunta maamulkaasi ee Jawhar, waxaana warsaxaafadeedka lagu sheegay in la soo dhawaynayo cid kasta oo ganacsato ah kuwaas oo jaadkooda ka soo dajinaya magaalada Jawhar.
Waxa muuqata inaanay wada socon maamul goboleedyada ka jira dalka somaliya iyo dawlada federaalka ah, iyada oo haatan maamulka Hirshabeelle u dhaqmayo sidii dawlad ka madax banaan xukuumada Muqdisho, iyaga oo ka hor imanaya go,aanada ka soo baxay dawlada ee lagu kordhiyey cashuurta jaadka.
Dawlada federaalka ah ee somaliya wali kamay hadal go,aanka ay qaateen ganacsatada jaadku iyo soo dhawaynta uu u sameeyey maamulka Hirshabeelle.